I-Google Pixel 3 kunye nePixel 3 XL, ke ngoko zithelekiswa nokhuphiswano | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UIgnacio Sala | | Izixhobo ze-Android, Huawei, Samsung
Uphando olukhulu lukaGoogle izolo lubonise ngokusesikweni uluhlu olutsha lwePixel kwintsalela yonyaka kunye nolandelayo: iPixel 3 kunye nePixel 3 XL, ezinye iimodeli esele zikhona zonke iinkcukacha zichaziwe, Iimpawu kunye nemifanekiso kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, ngenxa yoko isiphumo sokumangaliswa asifikanga nangaliphi na ixesha.
Kodwa uGoogle akavelisanga kuphela iiPixels ezintsha, kodwa ukwazisile Isilayidi sikaGoogle Pixel, Ukhetho lukaGoogle kwi-Pro Pro kunye neMicrosoft Surface kunye nesithethi esitsha esine-screen esibizwa IHome Home Hub. Ukulandela ukumiliselwa kwoluhlu olutsha lwePixel, inani leemodeli ezikhoyo kuluhlu oluphezulu lonyukile kwaye ilandelayo.
Namhlanje, kwifowuni ephezulu esinayo I-Samsung Galaxy Note 9, i-Samsung Galaxy S9, iHuawei P20 Pro, i-iPhone XS, i-iPhone XS Max, iPixel 3 kunye nePixel 3 XL. Ngamnye kubo usinika iinkcukacha ezahlukeneyo, ngakumbi ukuba sithetha ngecandelo lokufota, apho okomzuzwana kwaye ngokungabikho kovandlakanyo lwe-DXoMark, iHuawei P20 Pro ngukumkani wangoku wentengiso, nangaphezulu kwe-iPhone XS entsha kunye ye-Galaxy Qaphela i-9.
Apha ngezantsi sichaza yonke i-eUkucaciswa kweetheminali eziphambili eziphezulu yentengiso namhlanje.
I-Pixel 3 XL
Ubukhulu 161.9 × 76.4 × 8.8 mm 158 × 78.8 × 8.5 mm 155x78x8.2 mm 144x71x7.7 mm 157x77x7.7mm 145.6 × 68.2 × 7.9mm 158 × 76.6 × 7.9mm
U bunzima I-201 gram I-189 gram I-190 gram I-177 gram I-208 gram I-148 gram I-184 gram
Isikrini I-6.4 intshi Super AMOLED I-6.2 intshi Super AMOLED I-AMOLED eyi-intshi ezingama-6.1 5.8 intshi OLED 6.5 intshi OLED 5.5 intshi HD epheleleyo I-6.3 intshi ye-QHD OLED
Isigqibo I-1440 × 2960 px I-1444 × 2960 px I-1080 × 2240 px I-1125 × 2436 px I-1242 × 2688 px I-1080 × 2160 px I-1440 × 2960 px
Ukuchasa amanzi / uthuli - IP68 amanzi / uthuli - IP68 amanzi / uthuli - IP68 amanzi / uthuli - IP68 amanzi / uthuli - IP68 amanzi / uthuli - IP68 amanzi / uthuli - IP68
Ukugcina I-128 GB / 512 GB I-64 GB / 128 GB 128 GB I-64 GB / 256 GB / 512 GB I-64 GB / 256 GB / 512 GB 64 / 128 GB I-64 GB / 128 GB
Inkqubo Exynos 9810 Exynos 9810 / Snapdragon 845 Snapdragon 845 A12 Bionic A12 Bionic Snapdragon 845 Snapdragon 845
Imemori ye-RAM I-6 GB / 8 GB 6 GB 8 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
MicroSD Ewe ukuya kuthi ga kwi-512GB Ewe ukuya kuthi ga kwi-512 GB Hayi Hayi Hayi Hayi Hayi
Ikhamera emibini yangasemva I-12 mpx yokuvula okwahlukileyo okwahlula-hlulayo kunye nokuzinzisa okubonakalayo I-12 mpx yokuvula okwahlukileyo okwahlula-hlulayo kunye nokuzinzisa okubonakalayo I-20 mpx + 40 mpx nge-stabilizer ebonakalayo I-12 mpx Dual nge-stabilizer ebonakalayo I-12 mpx Dual nge-stabilizer ebonakalayo I-12 mpx f / 1.8 yekhamera enye enesiqinisi samehlo I-12 mpx f / 1.8 yekhamera enye enesiqinisi samehlo
Ikhamera yangaphambili I-12 mpx I-12 mpx I-8 mpx I-12 mpx I-12 mpx 8 mpx ezimbini 8 mpx ezimbini
Ibhetri 4.000 mah 3.500 mah 4.000 mah 2.658 mah 3.174 mah 2.915 mah 3.420 mah
Khu seleko Inzwa yeminwe kunye nokuqondwa kobuso Inzwa yeminwe kunye nokuqondwa kobuso Inzwa yeminwe kunye nokuqondwa kobuso I-ID yobuso I-ID yobuso Inzwa yeminwe kunye nokuqondwa kobuso Inzwa yeminwe kunye nokuqondwa kobuso
Amanani € 1008.99 (128 GB) - € 1.259.01 (512 GB) € 899 (64 GB) - € 1.099 (256 GB) € 899 (i-128 GB) € 1.159 (64 GB) - € 1.329 (256 GB) - € 1.559 (512 GB) € 1.259 (64 GB) - € 1.429 (256 GB) - € 1.659 (512 GB) € 849 (64 GB) - 949 (128 GB) € 949 (64 GB) - € 1049 (128 GB)
1 Icandelo lamagumbi
2 Inotshi phantse wonke umntu
3 Amandla aphezulu kuluhlu oluphezulu
4 Ubunzima kunye nemilinganiselo
5 Uluhlu lwamaxabiso
6 Yeyiphi eyona ndlela ilungileyo?
7 Uyithenga phi iGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL
Ngokumiliselwa kweGoogle Pixel 2, isigebenga sokukhangela sabonisa ukuba kanjani Kuyenzeka ukuba ufumane isiphumo se-bokeh ngaphandle kokusebenzisa iikhamera ezimbini Kwisiphelo, njengoko kubonakala ngathi kunyanzelekile xa iApple yazisa i-iPhone 7 Plus. Zonke izixhobo ezikumgangatho ophezulu esinokuzifumana kolu luhlu zidibanisa ubuncinci iikhamera ezi-2, ngaphandle, komnye unyaka, kwiPixel 3 kaGoogle kunye nePixel 3 XL.
UGoogle ulandela indlela yakhe ephawuliweyo, kodwa kungekuphela ukuba sithetha ngekhamera engemva kwesixhobo, kodwa nokuba sithetha ngecandelo lokufota leeselfie, kuba iimodeli ezintsha zisebenzisa Iikhamera ezimbini ngaphambiliZombini ziyi-8 mpx, ngelixa ezinye iitheminali kolu luhlu zikhethe enye kuphela.
Inotshi phantse wonke umntu
Kunyaka ophelileyo, enye yezona zinto zingathandekiyo kwiGoogle Pixel 2 XL yayisisikrini, isikrini esivela kuGoogle khange balinganise ngokuchanekileyo kwaye ibonelela ngeziphumo ezibi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye izixhobo zokugqibela. Ngethamsanqa, ngohlaziyo lwesoftware, uGoogle usombulule le ngxaki inkulu.
I-Google Pixel 3 isinika isikrini se-5,5-intshi ngesisombululo se-FullHD + ngefomathi ye-18: 9, ngokufanayo naleyo ifunyenwe kwiHuawei P20 Pro, kodwa eyokugqibela inescreen esikhulu, ii-intshi ze-6,1. Umzalwana omdala, iGoogle Pixel 3 XL, isisombululo yi-QHD, Isisombululo esifanayo esinokufumana zombini i-Galaxy Note 9 njengakwi-Galaxy S9 + evela kwinkampani yaseKorea i-Samsung.
Inotshi, into iGoogle eyayigxeka kakhulu kulo nyaka uphelileyo, ukuba yinxalenye yesizukulwana esitsha sePixel 3 XL, inotshi ukuba xa siyithelekisa nezinye iimodeli, inika umbono wokuba banzi kakhulu kunabanye. Ukuba ujonga ifowuni ngaphandle kwenotshiNamhlanje, ekuphela kwendlela ekhoyo kwintengiso yiGlass Note 9 kunye neGPS S9, iiterminal ezingafuniyo ukulandela imeko yentengiso.
Amandla aphezulu kuluhlu oluphezulu
Zonke iitermina eziphezulu ze-Android azinakuba yinxalenye yolu luhlu ngaphandle kokulawulwa yeyona processor inamandla namhlanje yiQualcomm, Snapdragon 845, ihamba kunye nemali eyahlukeneyo ye-RAM. Ngale ndlela, zombini iGoogle Pixel 3 kunye neGoogle Pixel 3 XL zizitishi, kunye ne-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max, ezisinika inani elincinci le-RAM: 4 GB.
Isamsung kunye neHuawei US nikeza ukhetho lokuba ukwazi ukonwabela i-8 GB yememori ye-RAM, esivumela ukuba sigcine usetyenziso olungaphezulu ngasemva ngaphandle kokuphinda silayishe ngalo lonke ixesha silifuna, ngenxa yoko isantya sokulayisha siphezulu kunakwisizukulwana sesithathu seGoogle Pixel.
Inkampani esekwe kwiCupertino ilawula i-RAM kunye nokusebenza kwezicelo ngasemva ngendlela, kungoko isixa sememori esisifumana ngaphakathi, ayifanelanga ukuba ibe phezulu njenge-Android, kwaye nge-4 GB kuphela iyakwazi ukuhambisa usetyenziso ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lweengxaki, ukusebenza okanye ukulibaziseka xa kuvulwa usetyenziso ngasemva.
Ubunzima kunye nemilinganiselo
Njengoko iminyaka ihamba, ubungakanani bezikrini ze-smartphone bukhule kakhulu, ngokuchanekileyo ichaphazela ubunzima kunye nobukhulu Ukusuka kwiitheminali. Imodeli enzima kakhulu kolu thelekiso yi-iPhone XS Max, yona ene-intshi yayo eyi-6,5 efikelela kubunzima beigram ezingama-208.
Ngale ndlela, ukuze UGoogle usebenze ekunciphiseni ubunzima yePixel 3 entsha kunye nePixel 3 XL, kuba ubukhulu be-5,5 intshi ubunzima bePixel 3 ifikelela kwiigram ezili-148, ngelixa iPixel 3 XL ine-intshi ezi-6,3 ubunzima bayo buli-184 gram. Ngokumalunga nobukhulu, konke kuxhomekeke kubungakanani besikrini sokugcina.
€ 1008.99 (128 GB) - € 1.259.01 (512 GB) € 899 (64 GB) - € 1.099 (256 GB) € 899 (i-128 GB) € 1.159 (64 GB) - € 1.329 (256 GB) - € 1.559 (512 GB) € 1.259 (64 GB) - € 1.429 (256 GB) - € 1.659 (512 GB) € 849 (64 GB) - 949 (128 GB) € 949 (64 GB) - € 1049 (128 GB)
Njengoko sibona kwitheyibhile engentla, zonke iiterminal eziphezulu eziyinxalenye yolu thelekiso ifumaneka kwii-euro ezingama-849, Ixabiso leGoogle Pixel 3 ye-64 GB, kwaye bafikelela kwi-1.259 euro ye-iPhone XS Max yemodeli ye-64 GB.
Ukuba sifuna ukugcina ubuninzi, ekuphela kwezinto ezikhoyo esinokuzifumana Isamsung ngeNqaku 9 kunye neApple ngeXS kunye neXS Max ene512 GB, nangona i-terminal ye-Samsung isivumela ukuba sandise isithuba ukuya kwi-1 TB sisebenzisa i-512 GB microSD.
Nantsi yonke into ixhomekeke kungekuphela kwiimfuno zethu, kodwa nakwizinto ezikhethiweyo zeempawu esinazo kunye ne-ecosystem esiyisebenzisa kwikhompyuter yethu. Ngokucacileyo, ukuba siyafuna ukuhambelana okuphezulu neMac, Olona khetho lulungileyo yi-Apple iPhone.
Ukuba sinePC, naluphi na ukhetho lweWindows lusebenza ngokuchanekileyo. Kodwa ukuba sikwenzile imveliso ethile yenkampani ye-SamsungNjengomabonwakude okanye ithebhulethi, eyona nto sinokuyenza kukuqhubeka nokubheja kwinkampani yaseKorea ngokuhambelana nokusinika izixhobo zabo.
Ukuba ufuna ukuba yenye ye kuqala ukonwabela uhlaziyo Kwiinguqulelo ezintsha zeenkqubo zokusebenza, zombini iiPixels zikaGoogle kunye neeApple iPhones zezona zikhetho zibalaseleyo, kuba zihlala zihlaziywa kwangoko, ngaphandle kokulinda abavelisi ukuba bahlengahlengise iindlela zabo zokwenza ngokwezifiso.
Ukuba ikhamera yinto ebalulekileyo, ukuba siqwalasele uhlalutyo lwe-DXoMark, olona khetho lufanelekileyo namhlanje Huawei P20 Pro, Kodwa kufuneka silinde iGoogle Pixel 3 entsha ukuba idlule ezandleni zale nkampani, eye yaba sisalathiso kwimarike yomnxeba, nangona ayinguye wonke umntu ovumelana nohlalutyo.
Uyithenga phi iGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL
NjengeGoogle Pixel 2 XL, isizukulwana esitsha sohlu lwePixel sikaGoogle siyafumaneka kwivenkile kaGoogle esemthethweni, apho sinokugcina khona nasiphi na isiphelo esitsha. Oku kubhukisha, kunye nokuthengwa okulandelayo kubandakanya iinyanga ezi-6 zeNtlawulo yoMculo ku-YouTube simahla.
Ukuthunyelwa kokuqala kuya kuqala ukuthunyelwa kwiiveki ezi-3 okanye ezi-4, ke kuya kufuneka ube nomonde ukonwabela ukubheja kukaGoogle kwihlabathi leefoni. Okwangoku, iGoogle Pixel 2 XL, singafumana kwintengiso ngaphezulu kwe-400 euro kwiAmazon, kuba iwebhusayithi esemthethweni kaGoogle isekwixabiso elifanayo apho yakhutshwa khona kunyaka ophelileyo.
Nangona okwangoku abaqhubi bengakhange baphawule ngalo mbandela, kunokwenzeka ukuba kungekudala qala ukwazisa ngokwenyusa okwahlukileyo ukuze ubambe esi sixhobo esimangalisayo, ubuncinci ekuqaleni, kungekudala. Siza kuphaphama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Google Pixel 3 kunye nePixel 3 XL, nantsi indlela ethelekiswa ngayo nokhuphiswano